सजिलै नभएपछि अभिनेत्री ऋचाको बच्चा यसरी निकालियो…. – Sandesh Press
सजिलै नभएपछि अभिनेत्री ऋचाको बच्चा यसरी निकालियो….
September 10, 2021 279
काठमाडौं–अभिनेत्री ऋचा शर्मालाई पुत्रलाभ भएको छ । गत वर्ष दीपेक्षविक्रम राणासँग विवाह गरेकी ऋचाले काठमाडौंको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा बिहान ७ बजेर ५२ मिनेटमा छोरालाई जन्म दिएकी हुन् ।
अस्पतालका अनुसार शल्यक्रियापछि बच्चा जन्मिएको हो । बच्चाको तौल तीन किलो एक सय ग्राम छ । सामाजिक सञ्जालमा ऋचाको श्रीमान दीपेक्षलेले छोरा काखमा लिएको फोटो राखिएको छ ।
ऋचाले गत वर्ष दीपेक्षविक्रम राणासँग विवाह गरेकी थिइन्। ‘भिसा गर्ल’, ‘उमा’, ‘लुट’, ‘टलकजंग भर्सेस टुल्के’, ‘सुनकेशरी’लगायतका फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी ऋचा पछिल्लो समय टेलिभिजन रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’मा निर्णायक सदस्य थिइन् । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार नै गत साताको यो शोमा उनी उपस्थित भएकी थिइनन् ।
ज्यानमा’रा रोड नारायणघाट मुग्लिंग हे भगवान यो के भयो !भिनेत्री ऋचा शर्मा बनिन् आमा, बच्चा जन्मिनु अघि आइदियो यस्तो समस्या।
अभिनेत्री ऋचा शर्मालाई पुत्र लाभ भएको छ ।
बुधवार बिहान थापाथलीस्ठित नर्भिक अस्पतालमा उनले छोरालाई जन्म दिएकी हुन् । ऋचा निर्णायक रहेको ‘कमेडी च्याम्पियन’ ले फेसबुक पेजमार्फत उनी आमा बनेको जानकारी गराएको हो । आमा र सन्तान दुवैको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको बताइएको छ । ऋचाका श्रीमान दिपेक्ष राणाले छोरालाई बोकेको एक तस्बिर बाहिरिएको छ ।
अस्पतालका अनुसार नर्मल तरिकाले बच्चा नजन्मेपछि शल्यक्रियापछि बच्चा जन्मिएको हो । बच्चाको तौल तीन किलो एक सय ग्राम छ ।ऋचाको २०७६ मंसिर २१ गते दिपेक्ष राणासँग विवाह भएको थियो । विवाहअघि उनीहरु करीब दुई वर्ष प्रेममा थिए ।
यस वर्षको न्यू इयरमा ऋचाले सोसल मिडियामा श्रीमानसँग सजीवनको विरुवालाई पानी हालिरहेको एक तस्बिर पोस्ट गर्दै आफू आमा बन्न लागेको जानकारी दिएकी थिइन् । डेलिभरी हुने समय नजिकिएपछि उनले हालै ‘कमेडी च्याम्पियन’ बाट विश्राम लिएकी थिइन्
Next८१ वर्षीय बुढालाई धो का दिएर फ रार भइन् श्रीमती,घरको सम्पत्ति पनि यसरी लु टेर फ रार (भिडियो हेर्नुस्)
पल शाह धरौटीमा नछुट्ने
ब’न्जीजम्पका क्र’ममा डोरी चुँ’डिएपछि ८० फिट तल ख’सेर महिलाको मृ’त्यु !!